Individual Lending Loan Officer (Bago, Phyu, Kawa, Kyauktaga) – Early Dawn Microfinance
Individual Lending Loan Officer (Bago, Phyu, Kawa, Kyauktaga)
Bago, Phyu, Kawa, Kyauktaga (Bago Region)
Early Dawn Microfinance Company သည် လက်ရှိတွင် မြန်မာနိုင်ငံတဝှမ်းရှိ ဌာနခွဲပေါင်း ၆၈ ခုတွင် အဖွဲ့ဝင်ပေါင်း ၂၇၀,၀၀၀ ကျော်ကို ချေးငွေဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့ အောင်မြင်နေသော အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်း အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ကျွနု်ပ်တို့ အဖွဲ့အစည်းသည် ဝန်ထမ်းပေါင်း ၁,၀၀၀ ကျော်နှင့်အတူ မြန်ဆန်စွာ ဖွံဖြိုးတိုးတက်လျက်ရှိပြီး မြို့နယ်အသစ်များ တိုးချဲ့ရန် ထူးချွန်ထက်မြက်သော ဝန်ထမ်းအင်အားများ ဖြည့်တင်းရန် လိုအပ်နေပါသည်။ DAWN သည် စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနတွင် မှတ်ပုံတင်ထားပြီး ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနမှ အသိအမှတ်ပြုလိုင်စင်ရရှိထား သော အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာ ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် ချေးငွေ ဝန်ဆောင်မှုပေးနေသော အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအဖြစ် ရပ်တည်လျက်ရှိသည်။
Location : Bago, Phyu, Kawa, Kyauktaga (Bago Region)
ဤရာထူးသည် Dawn ၏ တစ်ဦးချင်းချေးငွေဌာနအတွက် အလားအလာရှိသော ချေးငွေယူမည့်သူများကိုရှာဖွေ စုဆောင်း ရရှိရေး၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၏ ငွေကြေးဆိုင်ရာစစ်တမ်း ကောက်ယူရရှိရေး၊ ချေးငွေများထုတ်ပေးရန်နှင့် ပြန်လည် ကောက်ခံရေး၊ ပြည့်ဝသောချေးငွေဝန်ဆောင်မှုများပေးနိုင်ရေး၊ တစ်ဦးအလိုက် ချေးငွေအရည်အသွေး ထိန်းသိမ်း ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ သတ်မှတ်ထားသော လစဉ် နှင့် နှစ်စဉ် လျာထားချက်များ ပြည့်မီရေးအတွက် တာဝန်ရှိသည်။
University graduate in finance, economics, accounting or related field.
တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ စီပွားရေး (သို့) ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲရေး (သို့) စာရင်းအင်းတို့ နှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သော ဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိထားသူဖြစ်ရမည်။
One year working experience as microfinance individual loan officer or in retail banking or sales preferably in the specific market segment for the Individual Lending Unit.
တစ်ဦးချင်းချေးငွေ အရာရှိရာထူးဖြင့် အနည်းဆုံး တစ်နှစ် အတွေ့အကြုံရှိရမည် (သို့) တစ်ဦးအလိုက် ချေးငွေလုပ်ငန်းတွင် တိကျခိုင်မာသော ဈေးကွက်အတွင်း ဝန်ဆောင်မှုပေးခဲ့ဖူးသော အတွေ့ကြုံ ရှိရမည်။
ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး နှင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ခြင်းအပေါ် အထူးကောင်းမွန်ရမည်။
ငွေကြေးနှင့်သက်ဆိုင်သော စီစစ်တွက်ချက်မှုများ ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်ရမည်။
Interested and qualified candidates are requested to send an Application Letter, Curriculum Vitae to: jobs@dawn.com.mm or Human Resources Department, No.587, 3rd Floor, The Regency Offices, Pyay Road, 2nd Ward, Kamayut Township, Yangon or
Zonal Office, No (259), No (5) District, Meiktila-KyaukPadaung Road, NangTawKone Ward, Meiktila Township, Mandalay Region not later than 5P.M. 23th, May 2022 (Monday).